विश्वस्तरीय जनशक्ति तयार गर्छौं - Karobar National Economic Daily
विश्वस्तरीय जनशक्ति तयार गर्छौं
query_builderApril 21, 2017 11:37 AM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility389
ग्लोबल इन्टरनेशनल कलेजको स्थापना कसरी भयो ?
ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्टको व्यवस्थापन सङ्कायमा शैक्षिक सफलतापश्चात् नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय पाठ्यक्रम लागू गरेर विश्वस्तरीय सक्षम जनशक्ति तयार गर्नका निमित्त २००९ मा ग्लोबल कलेज इन्टरनेशनलको स्थापना भएको हो ।
यो संस्था कस्तो भिजन/लक्ष्य राखेर अघि बढिरहेको छ ?
यस ग्लोबल कलेज इन्टरनेशनलमा क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीको ए लेभल कोर्ष सफलता पूर्वक उत्कृष्ट नतिजाका साथ सञ्चालन भइरहेको छ ।
यो कलेज गुणस्तरीय शिक्षामा अब्बल रहिरहन के कस्ता नयाँ योजना ल्याएको छ ?
यहाँ शैक्षिक क्रियाकलापका साथसाथै अतिरिक्त क्रियाकलापमा पनि अत्यधिक जोड दिएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शैक्षिक वातावरण निर्माण गरिन्छ । यहाँका रिजल्टले पनि यो कलेज शिक्षामा सधै अब्बल रहेको पुष्टि गर्छ । यहाँबाट विद्यार्थीहरूले प्रयोगात्मक तथा विश्लेषणात्मक क्षमताकोे चौतर्फी विकास गर्ने अवसर यस ए लेभल कोर्षबाट पाइरहेका छन् ।
ए लेभलको कोर्ष पढ्न विद्यार्थीले यो कलेजलाई नै रोज्नुपर्ने कारणहरु के के हुन् ?
अनुभवी एवम् दक्ष शिक्षकहरूद्वारा प्रशिक्षण गराई उच्च गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नमा हामी केन्द्रित छौं । त्यति मात्र होइन, यस कलेजमा पढ्ने विद्ययार्थीहरुको लागि प्रयोगात्मक तथा विश्लेषणात्मक शिक्षामा जोड दिई पढाइन्छ ।
जसले गर्दा यहाँबाट ए लेभल पढेर सकेका विद्ययार्थीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् । त्यसैले गर्दा ए लेभल पढ्ने व्यक्ति यो कलेज नै रोज्नु उपयुक्त हुन्छ । यहाँबाट ए लेभल कोर्ष उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका उत्कृष्ट कलेज तथा विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत छन् ।
पदमराज सापकोटा, ग्लोबल इन्टरनेशनल कलेज